ကောင်းကင်ဖြူ: February 2012
မင်္ဂလာပါ ဗျာ … ။ ကားအကြောင်း တွေ မရေး ဖြစ်တာလည်း ကြာပါပြီ … ။ ဒီနေ့တော့ ကျနော် blogger မိတ်ဆွေ သူငယ်ချင်း များ ၊ ကျနော် blog လေးကို ရောက်ရှိလာတဲ့ ဧည့်သည် များအတွက် ကား modified လုပ်တဲ့ အကြောင်းရာလေး ကို ကျနော် နားလည် သလောက် ပြောပြပါမယ် ... ။
ကျနော် ၏ blogger မိတ်ဆွေ သူငယ်ချင်း များ မိမိပိုင် ကားလေး ကို modified လုပ်မယ် ဆိုရင် နည်းနည်း တော့ အတောက်ကူ ဖြစ်မယ် လို့မျှော်လင့်ရပါတယ် ။
နိုင်ငံတိုင်း မှာ ကား modified လုပ် တဲ့ အကြောင်းကို ကား ပိုင်ရှင် တိုင်း စိတ်ဝင်စား တက်ပါတယ် ။ ဒါ ကြောင့် ပြည်ပ နိုင်ငံ တွေမှာ ရုပ်သံ အစီစဉ် က နေ ကား modified လုပ်တဲ့ အကြောင်း ကို စိတ်ဝင်စား ဖွယ် ထုတ်လွှင့် ပြသ တာတွေ့ ရပါတယ် … ။ ကျနော် တို့နိုင်ငံ မှာ လည်း တစ်နေ့ တော့ ဖြစ်လာ လိမ့်မယ် လို့မျှော်လင့် ရပါတယ် … ။
ကား တစ်စီး ကို modified လုပ်တဲ့ နေရာမှာ အဓိက ၃ ပိုင်း ခွဲခြားထား တာ တွေ့ ရပါတယ် ။
၁ …. Engine modified လုပ်ခြင်း
၂ …. Electrical modified လုပ်ခြင်း
၃ …. Body modified လုပ်ခြင်း
ဒီ သုံး မျိုး ထဲကမှ ကျနော် အလုပ်မှာ ရှိတဲ့ body modified လုပ်တဲ့ အကြောင်း ကို ပဲ အဓိက ထား ဖော်ပြ သွားမှာ ပါ ။
ပထမဦး ဆုံး အနေနှင့် ကားတစ် စီး ကို modified လုပ် တော့မယ် ဆိုရင် မိမိ ကား အတွက် ပို ပြီးကောင်း သွား သလား ၊ ဒါမှ မဟုတ် ဆိုး ကျိုး ကို ဖြစ်သွားစေ လားဆိုတာ အရင် ရှင်းပြပါမယ် ။
Modified လုပ်ပြီ ဆိုမှ တော့ ကိုယ့် ကားလေး ပို ကောင်းသွားအောင် ၊ ပို ပြီး လှ သွားအောင်း လုပ်တဲ့
သူတွေ ကြီးပါပဲ … ။
ဒါပင်မဲ့ ကားတစ်စီး ကို စနစ် တကျ modified လုပ်ခြင်း ဟာ ကောင်းကျိုး ဖြစ် စေသလို ၊ စနစ်တကျ မလုပ်ရင် တော့ ဆိုးကျိုး ဖြစ်စေ တယ်ဆိုတာကို သတိ ပြုရမှာပါ ။
စနစ်တကျ modified လုပ်ခြင်း
Engine ကို ဖြစ်စေ ၊ Electrical ပိုင်းဆိုင်ရာကို ဖြစ် ၊ Body ကို ဖြစ်စေ modified လုပ်တော့ မယ်ဆိုရင် အရေးကြီး ဆုံး တွက်ချက် မှု့ က မိမိ ကားရဲ့ vibreation ပါပဲ … ။ ကိုယ် တပ်ဆင်မဲ့ modified လုပ်ထားတဲ့ ပစ္စည်း ဟာ မိမိ ကားရဲ့ vibreation ကို ဘယ်လောက် ခံ နိုင်ရည် ရှိလည်း ၊ vibreation ဒဏ် ခံနိုင်အောင် ဘယ်လို စနစ်တကျ တပ်ဆင် မလည်း ဆိုတာ သိထားမို့အရမ်း အရေးကြီး တဲ့ အချက် တစ်ခုပါ … ။
ကား Engine တိုင်းမှာ vibreation ရှိပါတယ် ။ Engine power များလေ vibreation များလေ ပါပဲ … ။ ဒါကြောင့် မိမိ တပ်ဆင် မဲ့ modified ပစ္စည်း ဟာ vibreation ဒဏ် ကိုခံ နိုင် အောင် စနစ် တကျ တပ်မှု့က ပိုပြီ အရေးကြီး ဆုံးပါ … ။
ဥရောပ ကား ၊ ဂျပန်ကား ၊ တရုတ်ကား စတဲ့ ကားတွေ မှာ အရည်သွေး အဓိက ကွာခြားချက်က တော့ ကားအတွက် တပ်ဆင် ရာမှာ vibreation ရဲ့ ဒဏ် ကိုခံ နိုင်ရည် ရှိအောင် ပြုလုပ်ထား ခြင်းပါပဲ … ။
ဥရောပ ကားတွေ မှာ ဆို သဲကာ အဖြစ် တပ်ဆင်တဲ့ အပိုင်းမှာ တောင် vibreation ကို တန်ပြန် ခုခံ နိုင်တဲ့ အစိတ်ပိုင်း ပါ တာ ကို တွေ့ ရပါတယ် … ။
ဥပမာ တစ်ခု အနေ ပြောရ လျှင် နှင့် မိမိ ပိုင် model နိမ့် ကားလေး ကို နောက် ဆုံးပေါ် V8 Engine ကြီး တပ်ပြီး modified လုပ်တယ် ဆိုကြပါစို့…. ။
အရင်ဆုံး မိမိကား Engine ကို ဖြုတ်ပြီး လုပ်နည်း လုပ်ဟန် အတိုင်း Modified လုပ်မဲ့ V8 Engine တပ်တာပေါ့ ဗျာ … ။ အားလုံးပြီးသွားတော့ ကား က အရင်ထက် အဆပေါင်းများ စွာ စွဲပါတယ် ။ လှစ်လှစ် ကိုပြေးနေတာလေ … ။ နောက်ဆုံးပေါ် V8 Engine ဆိုတော့ အရမ်းကောင်းတာပေါ့ …။ modified လုပ်ပြီပြီး ချင်တော့ ကားပိုင်ရှင် လည်း အရမ်း သဘော ကျပေါ့ဗျာ … ။
သိမ့် မကြာခင် ချိန် မှာ အရမ်း စွဲ တဲ့ကားလေး ဘယ်စွဲလိုက် ၊ ညာစွဲ လိုက် ဖြစ်လာပါတယ် ။ များမကြာမှီ မှာ Transmission(ဂီယာ) ပျက်သွား ပါတယ် ။ body ပိုင်းဆိုင်ရာ တွေ တစ်ခုပြီး တစ်ခု
ချို့ ယွင်း လာပါတယ် ။ ဒါဖြစ်တက် တာလေးတွေ ပြောပြတာပါ …. ။
တန်ဖိုး ကြီး ဝယ်ထားတဲ့ မိမိတို့ ကား ကို အကုန် ကျ ခံ ပြီ ပျက်စီး ပစ်လိုက် သလို ပါပဲ ။
ဘာကြောင့် လည်း အဲ့လို ဖြစ်သွားရလည်း ဆိုရင် …
modified စလုပ်တဲ့ အချိန် မှာ မိမိ တပ်ဆင်မဲ့ ပစ္စည်း ဟာ vibreation ရဲ့ ဒဏ်ကို ဘယ်လောက်ထိ ခံနိုင် မလည်း ဆိုတာကို မစဉ်းစားမိခဲ့ လို့ ပါပဲ … ။ ကျနော် တို့က မိမိ ကား ကို V8 Engine တပ်မယ် ဆိုရင် မှုရင်း V8 Engine တပ်ထားတဲ့ ကားရဲ့ တပ်ဆင် မှု့ကို အရင်ဆုံး လေ့လာ ရမှာပါ … ။ ထိုကားမှာ Engine vibreation ကို ဘယ်လို ထိန်းချုပ် ထားတယ် ဆိုတာ ကို သေးစိတ် လေ့လာ ပြီး မှာ မိမိ ကား ပေါ်မှာ မှုရင်းအတိုင်း တုပ ပြီး တပ်ဆင် ရ ပါတယ် ။
ကောင်းဆုံး ဥပမာ တစ်ခု ပြောရ ၇င် ကျနော် တို့မြန်မာ ပြည် စက်မှု့ဇုံ က ထုတ်တဲ့ ဂျစ် ကား တွေ ကို ကြည့်ပါ ။
စက်မှု့ဇုံ ကထုတ်လိုက် ပြီး တစ်နှစ် အကြာ ထိ ဝပ်ရှော့ မသွားရသေး ဘူး ဆိုတဲ့ ကား မရှိလောက်အောင် ရှားပါတယ် … ။ မြန်မာ ဂျစ်ကား လောက မှာ နာမည်ကြီး တဲ့ surf Engine တပ်ထား ပါတယ် ဆိုတဲ့ ကား မှာ မူရင်း Toyota Hilux Surf မှာ ပါရှိတဲ့ Engine တပ်ဆင် မှု့နဲ့ယှဉ်ကြည့်မယ် ဆိုရင် တော်တော် လေး လွဲနေတာ တွေ့ ရမှာပါ ။ ဒါကြောင့် surf Engine နဲ့modified လုပ်ထားတာ မို့ လို ဝယ်လိုက် ပင် မဲ့ သုံးစွဲသူ အနေနှင့် တော့ အရည်သွေး အပြည့်ဝ ရမည် မဟုတ်ပါ ။
ဒါဟာ တပ်ဆင်မှု့အပိုင်း နည်းပညာ အားနည်းလို့ ပါ ။ ဘာ Engine ပဲ တပ်တပ် မှုရင်း တပ်ဆင် မှု့အတိုင်း (သို့ ) မှုရင်းထက် ကောင်းတဲ့ ပြင်ဆင်မှု့ ကို မိမိ ကား မှာ modified လုပ်မယ် ဆို ရင် ကျနော် တို့တပ်ဆင် လိုက်တဲ့ modified ပစ္စည်း ရဲ့ အရည်သွေးကို အပြည့် ဝ ခံစား ရမှာ ဖြစ်ပါတယ် … ။
အဲ့လို မဟုတ်ရင် တော့ ကျနော် အထက်မှာ ပြောခဲ့ သလို တန်ဖိုး ကြီး ဝယ်ထားတဲ့ မိမိတို့ ကား ကို အကုန် ကျ ခံ ပြီ ပျက်စီး ပစ်လိုက် သလို ပါပဲ ။
ထို့ ကြောင့် မိမိ ကားကို modified လုပ်ခြင်း ဟာ စနစ် တကျ မလုပ်ခဲ့ ဘူး ဆို၇င် တော့ မိမိ ကားအတွက် ဆိုးကျိုး များကို သာ ရရှိစေမှာပါ ဖြစ်ပါတယ် … ။
Modified ပစ္စည်း အရည်သွေး
ကျနော် အထက်မှာ ပြောခဲ့ သလို modified လုပ်ပြီ ဆိုမှတော့ မှုရင်း ထက်ကောင်းတဲ့ ပစ္စည်း ပဲ သုံးကြပါတယ်။ ဒါပင်မဲ့ body ကို modified လုပ်တဲ့ နေရာမှာ တော့ အများ စု ဟာ လှပဆန်းသစ် တဲ့ ပုံစံ ကို ပဲ ဦးစားပေးပြီ modified လုပ် တပ်ဆင် လိုက်တဲ့ အရည်သွေးကို မစဉ်းစား တက်ကြပါဘူး ။
အများသောအား body ကို modified လုပ် တပ်ဆင် လိုက်တဲ့ ပစ္စည်းတွေ ဟာ ရည်ရှည် မခံတာ တွေ့ ရပါတယ်
ဘာကြောင့်လည်း ဆိုရင် body modified လုပ်တဲ့ ပစ္စည်းတွေ ဟာ ဖိုက်ဘာ နဲ့ လုပ်တာများ ပါတယ် ။
ဒါကြောင့် ဖိုက်ဘာ ရဲ့ သဘာဝ ကို က ပူလာ လေ မာ ပြီး ကွဲ တက်သည့် အတွက် ရည်ရှည် အတွက် တော့ ဘယ်လို မှ အဆင်မပြေပါဘူး ... ။
ကားမှာ ရှိတဲ့ vibreation နဲ့အပူဒဏ် ကို ခံရပြီ ဆိုရင် အခုလို ကွဲသွား တက်ပါတယ် .... ။ ဒါက မိမိ ကား ကို modified လုပ်မယ် ဆိုရင် သတိထားသင့် တဲ့ အရာပါ ... ။
ဒါဆိုရင် ဘယ်လို ရည်ရှည် အသုံးပြု လို့ ရအောင် ဘယ်လို လုပ်မလည်း ဆိုတာ စဉ်းစားရပါပြီ ... ။
အထက်မှာ ပြောသလို ဖိုက်ဘာ နဲ့ လုပ်ထား တာ ဖြစ်တဲ့ အတွက် ရည်ရှည် ခံ မို့ ဆို မဖြစ်နိုင်ဘူး ဆိုပင်မဲ့
ကျနော် တို့ က မိမိကား ကို modified လုပ်ချင်တယ်လေ .... ရည်ရှည် မခံ ပင်မဲ့ လည်း မိမိလုပ်ချင် တဲ့ ပုံစံ လေး ဖြစ်သွား တာ လိုချင်တယ်လေ ... ။ ဒီတော့ ကျနော် တို့ အနေ နဲ့လုပ်နိုင်မဲ့ အရာ တစ်ခုပဲ ရှိပါတယ် .... ။ ကျနော် တို့တပ်ဆင်လိုက် တဲ့ modified ပစ္စည်း ကို Engine vibreation ဒဏ် ခံနိုင်အောင် ဘယ်လို အကောင်း ဆုံး လုပ်မလည်း ဆို တာပါ ... ။
ဒီလို တပ်ဆင် ရာမှာ ကော်ကပ် တဲ့နည်း လုံးဝ မ သုံးစေ ချင်ပါဘူး .. ။ body modified လုပ်တဲ့ နေမှာ သုံးတဲ့ ကော် တစ်မျိုး ရှိပါတယ် မြန်မာ ပြည်က အလုပ်ရုံ တွေ မှာ လည်း သုံးတာတွေ့ ဖူး သလို ပြည်ပ မှာ လည်း သုံးကြပါတယ် .... ။ ဒီ ကော် ရဲ့ ဆိုးကျိုး ကတော့ ကားဆေး အရောင် မှာရှိ colour effect နဲ့ဘယ်လို့ မှ တည့် ပါဘူး ... ။ ကော် ကပ် ပြီး တပ်ဆင် လိုက်တဲ့ modified ပစ္စည်း ဟာ ရည်ရှည် အတွက် ဘယ်လို မှ မဖြစ်နိုင် သလို မိမိကားရဲ့ မှုရင်း ဆေး ကို ပါ ပျက်စီး စေပါတယ် ... ။
နောက်တစ်ခု က တပ်ဆင် ရာမှာ Engine vibreation ကို ကောင်းဆုံး ခံနိုင်မဲ့ တပ်ဆင် မှု့ဖြစ်မို့အရေးကြီးပါတယ် ... ။ ဥပမာ သေချာ တဲ့ အထိုင် ကို သေသေချာချာ ပြင်ဆင်ပြီး တပ်ဆင်တာမျိုး ပြုလုပ်သင့်ပါတယ် .... ။
ဒါမှသာ ကျနော် တို့ modified လုပ် တပ်ဆင် လိုက်တဲ့ ပစ္စည်း ဟာ အတိုင်းတာ တစ်ခု ထိ ခံ နိုင်ရည် ရှိမှာပါ .... ။
ဒါက ကျနော် တို့မြန်မာ ပြည်မှာ modified လုပ်တဲ့ ပစ္စည်း အများစု ဖြစ်တက်တာ ကို ဘယ်လို လုပ်ရင် ရနိုင် တယ် ဆို တာ ကို ကျနော် အနေ နှင့် အကြံ ပြု တာပါ ... ။
ပြည်ပ နိုင်ငံတွေ မှာတော့ အခု လို body modified လုပ်တဲ့ နေရာမှာ မြန်မာ ပြည်မှာ လို ဖိုက်ဘာ နဲ့လုပ်ထားတဲ့ ပစ္စည်း တွေ သုံး တက်သလို အများစု ကတော့ modified လုပ်ရန် အတွက် သီးသန့်ရောင်းတဲ့ ပစ္စည်တွေ ပဲ သုံးတက်ကြပါတယ် ... ။ ဒီလို သီးသန့်ရောင်းတဲ့ ပစ္စည်းတွေ ဟာ မှုရင်း ကား body အတိုင်း ပြုလုပ်ထား တဲ့ အတွက် ရည်ရှည် ခံနိုင် ကြပါတယ် ။
ဒါ modified ပစ္စည်း တွေပဲ သီးသန့် ရောင်းတဲ့ ဆိုင် တစ်ဆိုင်ပါ ... ။ အခုမြင်နေရတဲ့ bumper က မှုရင်း Mitsubishi ASX ရဲ့ bumper ပုံစံ တူ ပါ .... ။ ဒီ bumper ကို မလေးရှား နိုင်ငံ ထုတ် ဖြစ်တဲ့ proton Inspira မှာ
တပ်ဆင် ပြီး Mitsubishi ပုံစံ modified လုပ်မို့အတွက် အခုလို သီးသန့်ရောင်းတာပါ ... ။
အောက်က ပုံလေးတွေ ကို ကြည့်ပါ proton Inspira ကို Mitsubishi ပုံစံ modified လုပ်ထားတဲ့ ပုံ လေးတွေပါ ... ။
ဒါ မှုရင်း ကား Mitsubishi ASX ရဲ့ ပုံ ပါ ။
ဒီကားရဲ့ ရှေ့bumper ပုံစံ အတိုင်း proton Inspira မှာ modified လုပ် တပ်ဆင် မှာပါ ... ။
ဒါကတော့ proton Inspira ရဲ့ မှုရင်း ပုံစံ ပါ ... ။
အခုလို proton Inspira ကို Mitsubishi ပုံစံ modified လုပ် တပ်ဆင် လိုက် ခြင်းသာ ဖြစ်ပါတယ် ... ။
ပြည်ပ မှာတော့ အခုလို အရည်သွေးကောင်းတဲ့ modified လုပ်ပြီ ပစ္စည် အစိတ်ပိုင်း တွေ ကို အလွယ် တကူ ဝယ်လို့ ရတာကြောင့် အဆင်ပြေ တာပေါ့ ဗျာ ... ။
ဒီလောက် ဆို ကျနော် မိတ်တွေ သူငယ် ချင်း များ မိမိ ကား ကို modified လုပ်မယ် ဆိုရင် နည်းနည်း တော့ ကြိုပြီး သတိပြု နိုင်လိမ့်မယ် လို့ ထင်မိပါတယ် .... ။
ကျနော် ကြိုက်မိ တဲ့ modified လုပ်ထားတဲ့ ကားတွေ ကို ကြည့်ရ အောင်နော် ...
ဒါ Toyota Corolla 1982 model ကို modified လုပ်ထားတဲ့ ပုံစံ ပါ ။ မြန်မာ ပြည်မှာ ဒီ လို ကားတွေ အများ ကြီး အသုံးပြုနေပါ သေးတယ် ... ။
ဒါကတော့ Toyota corolla 1993 model ဖြစ်ပါတယ် ... ။ ဒီ ကား လည်း မြန်မာ ပြည် မှာ အများဆုံး တွေ့ ရတဲ့ ကား model ဖြစ်ပါတယ် ... ။
body modified တပ်ဆင် တဲ့ အကြောင်းလေး ကို ကျနော် အချိန်ရ ရင် ရလို ဆက်လက် ရေးသွားပါမယ် ဒီ post လေးကို တော့ ဒီမှာ ပဲ အဆုံးသတ်လိုက်ပါပြီ .... ။
ဓာတ်ပုံ ကို google မှ ရယူခဲ့ပါသည် ။
Posted by မောင်ဘုန်း at 9:40 AM6comments
Labels: ကား modified လုပ်ခြင်း
ငါ ရေးတဲ့ ပန်းချီကား ဖြစ်ခဲ့ရင်
ငါ ကြိုက်တဲ့ အရောင်တွေပဲ
ချယ်သ လိုက် ချင် ..... ရဲ့ ။
ဆေးစက်တွေ ကို အရောင်ခွဲရင်း
ပုံဖော်နေ ရပြီ ..... ။
ဇီးဖြူသီး လိုမှန်း ငါ့ မသိခဲ့ ဘူး
ချို မလို နဲ့ ခါး
ခါး မလို နဲ့ချို
ရင်ခုန် စွာ စားသောက် ရတယ် နော် .... ။
ဒီ အရသာကို ကျေကျေ နပ်နပ်
ကြိုက်တက် ခဲ့ လို့ 
ရင်ခုန် သံတွေ တောင်
သံစဉ် ဖွဲ့ ကုန်ပြီ .... ချစ်သူ ... ။
စိတ်ဆိုးတိုင်း လမ်းခွဲ စကားပြော တက်တဲ့
ငါ့ ရဲ့ ချစ်လှစွာသော ပန်းလေးတစ်ပွင့် ... ရေ
မင်း မက်တဲ့ အိမ်မက်တိုင်း ကို
စိန်စီ ပစ်လိုက် ချင်တယ် ကွာ .... ။
ဘာကိုမှ မတောင်းတ တက်တဲ့
မင်းနဲ့တွေ့ မှပဲ
အဆုံးသတ် ရ ပြီ ။
ငါ့ .... ဆီမှာတော့
မင်းကို ချစ်တဲ့ အချစ်တွေ
ရင်နဲ့မဆန့် အောင် ရှိ လေ ..... ရဲ့ .... ။
Posted by မောင်ဘုန်း at 7:30 AM9comments
ဆန်း ကာ ရွေးတော့
လှဂုဏ် ကြွယ် တဲ့
ချစ်သူ ငယ် …… ။
အသား ရယ် စို
စကား ရယ် ဆို
ကြူကာ ဟ ရင်
“ ကို” ရင်မှာ စွဲ ပါလို့ 
ချစ်သူ ငယ် …. ။
မကြွား ဖြူ လို့ 
သစ္စာ ပုံ ပြီ
ချစ်သူ ငယ် … ။
ပင်ကို လှ ရယ်
ပန်းချီ ချယ် ရေး
နတ် ပန်းချီ မှာ
ငို ရ ရှာလို့ 
နှိုင်းမဲ့ လွန်း တဲ့
ချစ်သူ ငယ် …..။
ချစ်တဲ့ သူတိုင်း ပျော်ရွင် ခြင်းများစွာ ဖြင့် ပြည့်စုံစေ သော နေ့ ရက် လေးဖြစ်ပါစေ ... ။
ကျနော် မောင်ဘုန်း တစ်ယောက် တော့ ထို ဓာတ်ပုံလေး ကြည့်ပြီး အလွမ်း တွေနှင့်
ကုန်လွန် ရမည့် နေ့ ရက် လေးပေါ့ ..... ။
Posted by မောင်ဘုန်း at 11:55 PM 11 comments
မြဲ ရတော့ သည် …. ။
“ စံ” ထား ပြန်သည် ။
တမ်းတ ကုန် သည် ။
" တို့ " ရင်မှာ စွဲ
လေးစား ရ သည် ။
ယနေ့ ကျရောက်သော ဗိုလ်ချုပ် အောင်ဆန်း ၏ မွေးနေ့ အား ဂုဏ်ပြုသော အားဖြင့်
ဓာတ်ပုံ ကို google မှ ကူးယူခဲ့ပါသည်
Posted by မောင်ဘုန်း at 6:15 PM 8 comments
Labels: ဂုဏ်ပြု မှတ်တမ်း
Posted by မောင်ဘုန်း at 7:52 AM 10 comments
Posted by မောင်ဘုန်း at 8:39 AM9comments